युवायुवती कस्तो जीवनसाथी खोज्छन् ? | सुदुरपश्चिम खबर
युवायुवती कस्तो जीवनसाथी खोज्छन् ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ २८, २०७८ 45
घर–परिवार चलाउनका लागि श्रीमान र श्रीमतीको उत्तिकै दायित्व हुन्छ । उनीहरुले आ–आफ्नै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । श्रीमानको काम श्रीमतीले गर्नुपर्छ भन्ने होइन । श्रीमतीको काम श्रीमानले पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । उनीहरुको काम फरक हुन्छ, यद्यपि त्यो घर–परिवारकै निम्ति हुन्छ । यस किसिमको काममा दुबैको साथसहयोग जरुरी हुन्छ ।
घर–परिवार भावनाले मात्र चल्दैन । भौतिक आवश्यक्ताहरु पुरा गर्नका लागि आर्थिक कुराले उत्तिकै महत्व राख्छ । त्यसैले दिगो आयस्रोत भएकाहरुमाथि उनीहरु बढी भर पर्छन् । यद्यपि आयस्रोतको माध्याम भएर मात्र पुग्दैन, त्यसको व्यवस्थापन अरु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार